गोकुल बाँस्कोटाले को-को पार्दैछन् 'कोल्याप्स' ? (भिडियो ) - सबैको समाचार
गोकुल बाँस्कोटाले को-को पार्दैछन् ‘कोल्याप्स’ ? (भिडियो )
काभ्रे : एमाले काभ्रेका ईन्चार्ज एवं पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको जिल्लामा कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । आज बनेपामा बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता बाँस्कोटाले नवौँ जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित ३ जना सदस्यले सञ्चालन गर्ने पार्टीको कुनै अर्थ नलहेको बताउनुभयो ।
नेता बाँस्कोटाले धेरै चुरीफुरी गरे ‘कोल्याप्स’ हान्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । ‘एमालेलाई धेरै जिस्काए परिणाम राम्रो हुने छैन् । कसलाई कसरी कोल्याप्स हान्नु पर्ने हो । हामीलः पनि जानेको छौ । राजनीति ख्याल ठट्टाको बिषय होइन ।
एमालेसंग एजेण्डा छ । त्यहि एजेण्डा जनतालाई सुनाउँछ । बुझाउँछ । सानदार मतका साथ हामी जितेर आउँछौ । जनधार नभएकाहरू सामाजिक सञ्जालमा कराउछन् । बस्छन्, नेता बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।’